बिवाहपछि किन महिलाको हिप बढ्छ ? यस्तो रोचक छ कारण ! | Butwal Dainik
यो पनि पढ्नुहोस : बच्चा हुर्काउँदा आमा–बुबाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? के–के कुरामा ध्यान दिने?हरेक अभिभावकको चाहना हुन्छ, आफ्ना छोराछोरीले उन्नति गरून्, हरेक क्षणमा सफलता प्राप्त होओस्। तर सबैको चाहना पूरा नहुन सक्छ। कुनै बालबच्चाा हरेक कुरामा अगाडि हुन्छन् भने कुनै बालबच्चाा सबै कुरामा पछाडि हुन्छन्। आफूले चाहेजस्तो छोराछोरीको प्रगति देख्न बच्चाा हुर्काउँदादेखि नै आमाबुबाको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहन्छ।
आजको प्रतिस्पर्धी युगमा कुनै पनि व्यक्ति उच्च मनोबल, भावनात्मक रूपमा सबल, निडर समाजमा घुलमिल गर्न सक्ने नेतृत्व क्षमता भएको बनाउन बच्चा जन्माउँदादेखि नै आमाबुबा मानसिक रूपमा तयार छन् कि छैनन् भन्ने कुराले फरक पार्छ।हाम्रो जस्तो संस्कार भएको समाजमा बच्चा जन्माउँदा आमाबुबा मानसिक रूपमा तयार भएको पाइँदैन। कुनैकुनै समाजमा छोराछोरीमा अझै पनि विभेद हट्न सकेको छैन।
बच्चा जन्माउँदा मानसिक रूपमा तयार नहुँदा साना केटाकेटीहरू आधारभूत आवश्यकताको अभावमा हुर्कनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ आमाबुबाले बच्चाहरूलाई समय दिन सकेका हुँदैनन्। बच्चाहरूसँग बसेर उनीहरूका कुरा बुझ्ने समय आमाबुबासँग हुँदैन त्यसले गर्दा पनि बच्चाको सानो दिमागमा ठूलो असर परिराखेको हुन्छ।बच्चाहरूको विकास राम्रोसँग होओस् भन्ने चाहने हो आमाबुबाले साना नानीहरूलाई समय दिनुपर्छ। उनीहरूसँग बोल्दा आँखामा हेरेर कुरा गरिदिनुपर्छ। उनीहरूको कुरा सुनिदिनुपर्छ। तर, हाम्रो समाजमा आमाबुबालाई यो कुराको जानकारी छैन।हिजोआज आमाबुबाले बच्चालाई भुलाउन मोबाइल, कम्प्युटर, ट्याब, दिइहाल्ने प्रवृत्ति छ। तर निगरानी नगरी आफ्नै काम लाग्दा सम्बन्ध बिस्तारै बिग्रँदै जान्छ।